इनेप्लिज २०७१ चैत १२ गते १३:५८ मा प्रकाशित
भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आफ्नो प्रेमी बिराट कोहलीको खेल हेर्न अष्ट्रेलिया पुगिन् । तर, बिराटले एक दर्जन बलको सामना गर्दै मात्र एक रन बनाएर आउट हुँदा अनुष्काको मुहार कस्तो भएको थियो, क्रिकेट हेरिरहने सबैलाई त्यो थाहा छ । अनुष्का त एक उदाहरण मात्र हुन् । उनी त आफ्नो प्रेमी बिराटलाई समर्थन गर्न गएकी थिइन् । गएर भेटिन् पनि । सँगै खाना पनि खाइन् । उनी चाहन्थिन् बिराटले आफ्नै अगाडि शतक लगाउन् । आफूतिर हेर्दै ब्याट उठाउन् । तर, उनको त्यो चाहना अपूरो रह्यो । विश्वकपमा बिराटले शतक बनाएको हेर्न अब उनले चार वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । नायिका–प्रेमिकाको अगाडि नायक बन्न सकेनन् बिराट । १३ बलको सामना गरे, एक रन बनाए, मिचेल जोनशोनको बलमा विकेटकिपर ब्राड हाडिनलाई क्याच दिए अनि पभेलियन फर्किए, बस् ।
बिराटले सिधा कसैलाई पनि हेर्न सकेनन् । उनलाई थाहा थियो आज उनले आफ्नो देशको लागि केही गर्न सकेनन् । उनी मात्रै होइन, कप्तान धोनीबाहेक अन्य कसैले राम्रो खेल देखाएनन् । भारत विश्वकपको सेमीफाइनलबाट बाहिरिएपछि अहिले क्रिकेट जगतमै खैलाबैला मच्चिएको छ । भारतीय खेलाडीहरुको आलोचना सुरु भइसकेको छ ।
भारतको समर्थन गर्न हजारौं भारतीय नागरिक अष्ट्रेलिया पुगेका थिए । उनीहरुको ठूलो सपना थियो भारत फर्कदा ती खेलाडीसँगै ट्रफी लिएर फर्किने । बाकसभित्र भरी पानीमा राखेको माछाले भारतको झन्डा भएतिर खएर चारो खाँदैमा त्यसलाई भारतले जित्ने भविष्यवाणी भनेर हुँदैन । इतिहास बोलिरहेको थियो कि भारतले कुनै पनि हालतमा खेल जित्न सक्दैन भनेर ।
अष्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा भारतीय समर्थक धेरै उपस्थित त थिए तर उक्त मैदानमा भारतविरुद्ध सधैं अस्ट्रेलियाको पल्लाभारी रहँदै आएको थियो ।
३५ वर्षयता एसजिसी मैदानमा भारतले अस्ट्रेलियालाई एकपटक मात्र हराउन सकेको छ । २००८ मा सचिन तेन्दुलकरको शतकको मद्दतमा तीन एकदिवसीय शृंखलाको पहिलो खेलमा मात्र भारतले अस्ट्रेलियालाई हराएको थियो । विश्वकपअघि खेलिएको टेस्ट र एकदिवसीयमा एउटै खेल जित्न नसकेको भारतले विश्वकपमा आश्चर्यजनक प्रदर्शन ग¥यो । तर सेमिफाइनलसम्म पुग्दा जारी विश्वकपमा एउटा पनि खेल नहारेको भारतले एउटा खेल हारेर जितेका सबै यादहरु पनि बिर्साइदिएको छ । विश्वकपमा भारत र अष्ट्रेलिया १० पटक भिडेका थिए जसमा अस्ट्रेलियाले ७ पटक र भारतले ३ पटक मात्र जित्न सफल भएको थियो ।
अघिल्लो विश्वकपका स्टारहरु बिरेन्द्र सेहवाग, युवराज सिंह, गौतम गम्भीर, हरभजन सिंह, जहिर खान, आसिश नेहरा लगायत खेलाडी कहाँ अनि के गर्दै होलान् यतिबेला । उनीहरु टिममा समावेश हुन नसक्नुको कारण त अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । तर, अब भारत समर्थकहरुले पक्कै आवाज उठाउने छन् । चयनकर्ताले पनि पक्कै बुझिसके होला आफ्नो कमजोरी ।
भारत समर्थक दर्शक नै यसपटक भारतले एउटा पनि खेल नजितोस् भन्ने चाहन्थे । उनीहरुको दिमागमा एउटै कुरा थियो, जब भारतले लगातार खेल हार्छ अनिमात्र सिनियरलाई सम्झिनेछ । जब भारत विश्वकपबाट बाहिरिने छ तब मात्र अभिभावकलाई सम्झिने छ । तर उनीहरुको चाहनाबिरुद्ध खेल खेल्यो भारतले । सेमीफाइनलसम्म पुग्दा एउटा पनि खेल हार्नुपरेन उसले । यसबीचमा भारतका कयौं नयाँ रेकर्डहरु बने । भारतले खेल हारोस् भन्नेहरु नै भारतको जितको कामना गर्दै समर्थन गर्न थाले । लय समातेर समर्थकको मन जित्न सफल भारतले यतिबेला अन्त्यमा आएर सम्पूर्ण समर्थकलाई रुवाएको छ ।
विश्वकप सुरु भएयताकै ठूलो चहलपहल देखिन्थ्यो नेपालमा पनि बिहीबार । होटल, रेस्टुरेन्ट, टोल–टोलमा जम्मा भएर आ–आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्नेको घुइँचो थियो । विश्वकप सुरु हुनुपूर्व ‘आउट अफ ट्रयाक’ देखिएको भारतले बिश्वकपमा यतिको प्रदर्शन गर्नेमा कमैले बिश्वास गरेका थिए । कारण सिनियर खेलाडी टिममा समावेश नहुनु ।
अघिल्लो बिश्वकपमा क्यानसर रोगसँग लड्दै विश्वकप जिताउने ती नायक युवराज सिंह खोई यसपटकको विश्वकपमा ? त्यो विश्वकपमा भारतले उपाधि जित्नासाथ कप्तान धोनीलाई अँगालो हाल्दै भक्कानिएका युवराज भारतको बिहीबार भएकोे लज्जास्दपद हार देखेर कति रुँदै होलान् ? अघिल्लो विश्वकपमा हरेक खेलमा पहिलो बललाई नै बाउण्ड्री लाइन कटाउने विरेन्द्र सेहवागलाई कस्तो भइरहेको होला यतिबेला ? ती बलरहरु आशिष नेहरा, जाहिर खान, हरभजन सिंह अनि बायाँ हाते आक्रमक ब्याट्सम्यान गौतम गम्भीर कस्तो महसुस गर्दै होलान् यतिबेला ?
टोलीमा समावेस नभएकोमा आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो । तर, आफ्नो देशले हारेको हेर्न कुनै पनि खेलाडीलाई मन हुँदैन । यतिबेला ती सबै खेलाडी जसले अघिल्लो विश्वकपको उपाधिलाई धित मरुञ्जेल चुमेका थिए, यसपटक उपाधि आफ्नो घर आउन नसकेकोमा पक्कै पनि उनीहरुलाई लागेको हुन्छ । टोलीमा छनोट हुनु नहुनु अर्कै कुरा हो ।
अष्ट्रेलियालाई ३२८ रन बनाउन दिनु नै भारतको कमजोरी हो । अरु बेला सबै टिमलाई अलआउट गरेको भारतले अष्ट्रेलियाको भने सात विकेट मात्र झार्न सक्यो । यो नै भारतको खराब संकेत थियो । अर्को कुरा ३ सय २९ रन भारतको लागि कुनै ठूलो लक्ष्य होइन । ३ सय बलमा ३ सय २९ रन बनाउन सक्ने ब्याट्सम्यान नभएका पनि होइनन् भारतीय टिममा । तर सेमिफाइनलमा फेरि भारतले ट्रयाक छोडेको छ । ओपनर रोहित शर्मा र शिखर धवनले सुरुवात त रामै्र दिए । तर, त्यसलाई निरन्तरता नि सकेनन् । मध्यक्रमका व्याट्सम्यान पनि चलेनन् । ४४औं ओभरसम्म क्रिजमा रहेर ६५ रन बनाईसकेका कप्तान धोनी पनि रन आउट भए । उनलाई कसैले साथ दिन सकेनन् । जितका लागि ३३ बलमा ९८ रन चाहिएको बेला कप्तान रन आउटको सिकार भएपछि समर्थकको हालत कस्तो भो होला ?
तर नेपालमा भने भारतले हारेकोमा निराश हुने मात्र छैनन् । खुशी हुने पनि प्रशस्तै छन् । पत्रकार बबिन शर्माले फेसबुकमा लेखेका थिए– ‘म त ढुक्क छु, अष्ट्रेलियाले भारतलाई हराउने मात्रै छैन, विश्वकप नै कंगारुले जित्नेछ ।’ पत्रकार तेजेन्द्र काफ्ले लेख्दै थिए– ‘अष्ट्रेलियाले भारतलाई हराउनेबारे भने मेरो नि समर्थन, तर बिश्वकप भने न्युजिल्याण्डले लान्छ, यसमा भने म ढुक्क छु ।’
अर्को कुरा, भारतका समर्थक पनि पाकिस्तानी भन्दा कम चाहिँ छैनन् । पाकिस्तानका समर्थकले खेलाडीको पुत्ला जलाउँछन् । भारतकाले त खेलाडीको घरमै पुगेर पनि ढुंगा हानेका छन् । आशा गरौं, ‘धोनी एण्ड कम्पनी’लाई यस्तो आक्रमण चाहिँ हुँदैन । जे होस् अष्ट्रेलियाले ९५ रनले पाखा लगाएसँगै भारतको ‘घमण्ड’ भने समाप्त भयो आजबाट । अब कसरी टोलीलाई अगाडि लैजाने भन्ने कुरा निकै कुल क्याप्टेन भनेर चिनिने धोनीले बुझिसके होलान् । अब हामी चाहिँ बिश्वकप अष्ट्रेलियाले जित्छ या न्यूजिल्याण्डले भन्नेतर्फ अनुमान लगाउन थालौं । यति नै ।
– dainiknepal.com बाट